ရုပျရှငျ အစညျး အရုံး ဥက်ကဌ ရာထူး နှငျ့ ပတျသကျ ၍ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူ ပွော ပွီ - Owl Myanmar News
ရနျကုနျဇှနျ(၆) ရကျ နို ငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ လကျထကျ ပထမဆုံးအကွိမျရုပျရုငျအစညျးအရုံး ဥက်က ဌ အဖွဈ
တာဝနျပေးခွငျးခံလိုကျရသညျ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူနှငျ့ပတျသကျ၍ အနုပညာအတိုငျးအဝနျးအခြို့နဲ့
၎င်းငျးအား အားပေးနသေညျ့ ပရိတျသတျ အခြို့တို့အကွားလူမှုကှနျရကျစာမြာနာ မြားပျေါတှငျ
ဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျလကျြရှိသညျ ကို တှနေ့ရေပါသညျ
ထို့ကွောငျ့ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဌသဈ ကိုခနျ့စညျသူ၏ သဘောထား မှတျခကျြမြားအား
ကောကျနုတျတငျပွ လိုကျရပါသညျခုခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ ကို ဝဖေနျနကွေမယျဆိုတာကြှနျတျော
ကွိုတှကျပွီးထားပါကြှနျတျောတို့ လောကအတိုငျးအဝနျးတှေ ကရော ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြတဲ့
ကြှနျတျောပွောမယျ တာဝနျဆိုတာ ယူခငျြမှလညျး ရခငျြမှရတာ ရခငျြ သျောလညျး
ပေးခငျြမှ ပေးတာမြိုးလဗြောဆိုတော့ဘယျလိုပဲ ပွောကွပါစဗြေ
ာ ကြှနျတျော ကြှမျးတဲ့အနုပညာ ကြှနျတျောကငျြလညျနတေဲ့လောကထဲကထဲမှာ
ဆကျရှိနမေယျဆိုတာ ကြှနျတျောပွခငျြတယျ ကြှနျတျော လညျးဗြာ
ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျော မကြှမျးကငျြတဲ့ နိုငျငံရေးလောကထဲ ဝငျဖို့ဆိုတာ
သိပျကို ခကျခဲလှနျးပါတယျ နိုငျငံရေးသမားက နိုငျငံရေးလောကထဲကို သူငယျစဉျကတညျးက အသကျမှေးဝမျးပွုခဲ့တလို
ကြှနျတျောတို့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး ငယျစဉျကတညျးက အနုပညာပိုး တှေ ပါလာလို့
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောအနုပညာလုပျငနျးကို ဆကျလုပျသှားမယျ အနုပညာရှငျ မြိုးဆကျသဈလူငယျတှေ
မှေး ထုတျသှားမယျ CDM နဲ့ ပတျသကျလို့လုပျတာနဲ့ မလုပျတာ ဘာကှာသှား လဲဆိုတော့အိပျရတာနဲ့
အရမျးလိုကျတယျတဈရကျ နှဈရကျလောကျလမျးပျေါထှကျ ဒါလေးလုပျပေးပါလို့ပွောလိုကျတာနဲ
အခွားတဈဘကျမှာရှိတဲ့ အနုပညာရှငျခငျြးခငျြးလညျး သိတယျ
ခု နိုငျငံတျောလူကွီးတှေ ပိုသိမှာ ပေါ့ကို ခနျ့စညျသူရဲ့ Video မှတျတမျးလေး.
ပွောသှားတာလေး သဘောကလြို့ ကောကျနုတျ
ရန်ကုန်ဇွန်(၆) ရက် နို င်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ လက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်ရုပ်ရုင်အစည်းအရုံး ဥက္က ဌ အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံလိုက်ရသည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူနှင့်ပတ်သက်၍ အနုပညာအတိုင်းအဝန်းအချို့နဲ့ ၎င်းအား အားပေးနေသည့် ပရိတ်သတ် အချို့တို့အကြားလူမှုကွန်ရက်စာမျာနာ များပေါ်တွင် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိသည် ကို တွေ့နေရပါသည်
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ကိုခန့်စည်သူ၏ သဘောထား မှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြ လိုက်ရပါသည်ခုချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကို ဝေဖန်နေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော် ကြိုတွက်ပြီးထားပါကျွန်တော်တို့ လောကအတိုင်းအဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ် တွေကရောပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်ပြောမယ် တာဝန်ဆိုတာ ယူချင်မှလည်း ရချင်မှရတာ ရချင် သော်လည်း ပေးချင်မှ ပေးတာမျိုးလေဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေဗျာ ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည်နေတဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြချင်တယ် ကျွန်တော် လည်းဗျာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ကို ခက်ခဲလွန်းပါတယ် နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးလောကထဲကို သူငယ်စဉ်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းပြုခဲ့တလို
ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာပိုး တွေ ပါလာလို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေကြတာပဲလေဗျာ
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ် အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မွေး ထုတ်သွားမယ် CDM နဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့ မလုပ်တာ ဘာကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော်တာကွာသွားတာပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်)
တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အနုပညာရှင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်လမ်းပေါ်ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ်လောက်ရိုက်မှ ရတယ်ဆိုတဲ့ ငွေအမှောင့်ကို သူတို့ကောင်းကောင်းသိတလို
အခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်ချင်းချင်းလည်း သိတယ် ခု နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေ ပိုသိမှာ ပေါ့ကို ခန့်စည်သူရဲ့ Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာမပေးပါသဖြင့် နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်
ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
Tags:ရုပျရှငျ အစညျး အရုံး ဥက်ကဌ ရာထူး နှငျ့ ပတျသကျ ၍ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူ ပွော ပွီ